कम्युनिस्टलाई ‘मार्क्सवाद’ पढाउँदै कांग्रेस नेता ! – आफ्नो प्रेरक संसार
कम्युनिस्टलाई ‘मार्क्सवाद’ पढाउँदै कांग्रेस नेता !
Bibas chetan — ३१ असार २०७५, आईतवार ०८:५४0comment
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा मसालका नेता–कार्यकर्ता अहिले मार्क्सवाद सिक्न व्यस्त छन् । कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्तालाई मार्क्सवादबारे प्रशिक्षण दिन मार्क्सवादको ज्ञान भएका विद्वानहरू देश दौडाहमा निस्किएका छन् ।
रोचक पक्ष त यो छ कि, कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउने एकजना गुरु भने कांग्रेसका नेता रहेका छन् । उनी हुन्, प्रदीप गिरि । माक्र्सवादबारे ज्ञानको भण्डार मानिने गिरिले १५ वैशाखमा झापामा कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
१० हजार युवालाई मार्क्सवाद पढाउने लक्ष्यसहित झापाबाट सुरु भएको यो अभियानमा गिरिसँगै मोहनविक्रम सिंह, राम कार्की, हरि रोकालगायत प्रशिक्षक छन् । झापा, धुलिखेल र नेपालगन्जमा प्रशिक्षण सकिसकेको छ । प्रदेश र जिल्लाहरूमा दर्जनौँ प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्ने एकवर्षे योजना छ ।